Ọnụ ego dị elu na -ere ọkụ mgbakwunye vegan mgbakwunye 0 akwụkwọ nri efu hpmc capsule
Oke nha nha nha 00 0 ...
Ụlọ ọgwụ ọgwụ Oriental
Akwukwo capsules efu
Piel na agba Panton niile
Cellulose Akwukwo nri HPMC
Capsules na -agbari ngwa ngwa
Ọnọdụ nke Capsule:
Ekpebiela na Ikewapụ Ya
Ihe nlekọta ngwaahịa ọdịnaya ọdịnaya ahụike
1. Ogo dị elu, ọnụahịa asọmpi na nzaghachi ngwa ngwa;
2. Asambodo Kosher na Halal, asambodo COA, asambodo ISO;
3. Eke nwere ike kpuchie ya nke ọma na enweghị ọgwụ mgbochi, ụtọ na isi.
HPMC veg Capsules Nkọwapụta
Nkezi ibu (mg)
Okpokoro mgbidi okpu
Ọkpụrụkpụ mgbidi ahụ
Dome ọkpụrụkpụ (mm)
0,115 ± 0.020
9,00 ± 0.40
Njikwa ihe onwunwe dị ala:
Iji hụ na nchekwa na nkwụsi ike, a na -enyocha akụrụngwa niile maka capsule anyị nke ọma dabere n'ụkpụrụ ịdị mma nke ụlọ ọrụ nke emere na ntọala steeti pharmacopoeia.
Njikwa Ogo n'ichepụta:
A na -eme nlele nlele n'oge usoro nrụpụta iji dobe paramita niile n'usoro kwesịrị ekwesị iji mee ka nkwụsi ike dị mma.
Mgbasa ntụpọ: A na -enyocha ọnọdụ okpomọkụ, agba na viscosity n'okpuru nchịkwa siri ike.
Mmepụta Capsule: njikwa dị mma na -enyocha ọdịdị, akụkụ na mmiri. Onye na -ahụ maka ọrụ na -enyocha ọnọdụ gburugburu ebe obibi na ọkwa iru mmiri n'ime ụlọ mmepụta ihe, yana viscosity gluu na okpomọkụ.
Usoro nyocha: Onye na -ahụ maka ịdị mma na -enyocha capsule ahụ ahaziri site na nhazi igwe iji hụ na capsule ọrịre niile ruru ụkpụrụ dị mma. Ndị ọrụ na -ahụ maka ịhazi igwe na -agbazi na -edozi ma na -achịkwa oke nha.
Njikwa Ngwa Emechara:
A ga -enyocha ndepụta anụ ahụ na kemịkal nke capsule emechara tupu nkwakọ ngwaahịa. Naanị capsule ruru eru ka a ga -akwakọba maka ndị ahịa.
Dịka iwu GMP si kwuo, capsule niile juputara na ọnụ ọgụgụ ogbe doro anya yana edepụtara ịdị mma maka nsuso ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ejiri akwa plastik abụọ kpuchie ya na igbe abụọ (igbe dị n'ime na igbe mpụga)
Na mpaghara 60,000 square mita, ụlọ ọrụ ahụ na -ahụ maka mmepụta nke capsules osisi HPMC na HPMC na algae mmiri dị ka isi akụrụngwa. Ugbu a, anyị bụ otu n'ime ndị na -emepụta capsules oghere nwere ikike ikike ọgụgụ isi nọọrọ onwe ya na China ma anyị bụkwa onye ndu na ụlọ ọrụ capsule osisi nke China.
* Ị nwere ike ịnye nlele n'efu maka ule?
Ee, anyị nwere ike.
* Kedu ụzọ njem ị na -eji?
Site n'ikuku, n'oké osimiri na onye nnọchite anya.
* Ị bụ onye nrụpụta ma ọ bụ onye ahịa?
Anyị bụ ndị nrụpụta ọkachamara.
Nke gara aga: Nha ụlọ ọgwụ Oriental 0 HPMC Kpochara Capsules anaghị eri anụ
Osote: Oke nha njupụta dị elu 00 0 1 2 akwụkwọ nri na -acha ọbara ọbara na -acha ọcha hpmc capsule shei maka capsule slimming
Mkpụrụ kacha mma na Capsules Mmeju Veggie
Efu Capsules Gelatin efu 5
Nta Capsule pere mpe
Akwukwo nri Na ogwu
Ogo oke njupụta dị mma #000 00 0 1 ...
Oke nha nha nha 00 ka 2 agba na ebipụta ...
Pipe doro anya na -acha ọcha efu onye anaghị eri anụ capsul ...
Ịdị mma dị mma na -agbaze ngwa ngwa dị elu ...
Hot ere Iche iche Akwukwo nri Efu Capsule S ...
Ogo na -agbaze ngwa ngwa nha 00 0 1 2 blu ...